SAWIRRO: Paul Pogba oo soo bandhigay qaab cusub oo Shiineys ah oo uu tinta u soo jartay! | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » SAWIRRO: Paul Pogba oo soo bandhigay qaab cusub oo Shiineys ah oo uu tinta u soo jartay!
SAWIRRO: Paul Pogba oo soo bandhigay qaab cusub oo Shiineys ah oo uu tinta u soo jartay!
Xiddiga kooxda Manchester United ee Pogba ayaa laga yaabaa inuu isku diyaarinayo safar uu ku aadayo dalka Shiinaha, kaddib markii uu bartiisa Instagram-ka ku soo bandhigay qaab cusub oo uu tinta u jartay.
Paul Pogba ayaa aad u mashquulsan xagaagan maadama uu bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan safar ku aaday dhulka barakeysan ee Makka, isla markaana halkaas soonka qeyb ka mid ah ku soo qaatay.
Sidoo kalana xiddiga reer France waxa uu ciyaaray kulamadii uu xulkiisa Faransiisku la dheelay xulalka Sweden iyo England.
Isagoo waqtigaas mashquulka ah ku jira haddana ma iloobin timo jarashadiisii yaabka lahayd, waxaana uu markaan tinta u soo jartay qaab Shiineys ah.
Xiddiga kooxda Manchester United ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay isagoo tinta u soo jartay qaab cusub oo Shiineys ah, isagoo 24-sano jirkaan tintiisa ku soo qoray “#PogChina” oo ku qoran farta Shiineyska.
24-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey kooxda Jose Mourinho kula guuleystay Europa League, waxaana kooxda Man United tababarka ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub ay dib ugu soo laaban doonaan horraanta bisha July ee soo aaddan.
Red Devils ayaa markaas kaddib u dhaqaaqi doonta tartanka International Champions Cup, kaasoo la isugu diyaariyo xilli ciyaareedka cusub, waxaana ay wajihi doonaan kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Manchester City.